Nsogbu njem nlegharị anya na mgbake ebe: Akwụkwọ a ga-agụrịrị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Nsogbu njem nlegharị anya na mgbake ebe: Akwụkwọ a ga-agụrịrị
Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Akwụkwọ a ga-agụrịrị ọhụrụ
dere David Beirman
Ọ dabara na akwụkwọ na-ekpuchi ihe niile gbasara ọgba aghara na ọnọdụ ọjọọ ndị na-emetụta njem nlegharị anya ka ewepụtara na Halloween. Agbanyeghị, ka njem nlegharị anya na-amalite mgbake ya na COVID-19, nke a na-elekwasị anya na ihe ejima nke ihe egwu, ihe egwu na ohere.
Dị ka onye na-ede akwụkwọ a na-ekwesịghị ekwesị ka m mee mkpebi ọ bụla gbasara àgwà akwụkwọ a.
Edebere ikpe ahụ maka ndị na-agụ akwụkwọ ma ọ bụ ndị nkatọ. Agbanyeghị, enwere m ike ịgwa gị ntakịrị gbasara akwụkwọ a na mkpa ọ dị na ụlọ ọrụ njem.
N'ezie, akwụkwọ a bụ mkpuchi isiokwu nke isi ihe egwu na ọgbaghara na-emetụta ụlọ ọrụ njem nlegharị anya.
Site n'ebe ahụ, m na-atụle atụmatụ nke ụlọ ọrụ nlekọta ebe na-aga njem na azụmahịa njem nlegharị anya na-eji iji gbochie ha ime ma ọ bụ zaghachi ha ozugbo ha kụchara.
Akụkụ nsogbu ndị e kpuchiri n'akwụkwọ a bụ:
Covid-19 Isi nke kachasị ogologo n'akwụkwọ ahụ
Ndakpọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Ọgba aghara ahụike na ọrịa na-efe efe, tupu COVID-19
Ọdịda njikwa na ọrụ (ebumnobi nke onwe)
Ọgba aghara teknụzụ
Ihe egwu gburugburu ebe obibi na Ọgba aghara
Azụmahịa njem nlegharị anya ọ bụla nwere ike ịmetụta otu n'ime isiokwu ndị a ma anyị niile nwere ike mụta ọtụtụ ihe site na otu ebe njem nlegharị anya na azụmaahịa siri meghachi omume na nsogbu ndị a.
Na mgbakwunye na isiokwu ndị dị n'elu isi okwu mmeghe abụọ ahụ na-elekwasị anya n'ịkọwa ihe ize ndụ, nsogbu na nkwụsi ike yana gọọmentị, òtù ndị njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na mpaghara njem nlegharị anya na-abịaru nso n'ihe ize ndụ njem, nsogbu na mgbake.
A na-egosipụta isiokwu ndị a site n'ihe karịrị ọmụmụ ihe iri abụọ (20-2 n'isi nke ọ bụla) sitere n'akụkụ ụwa dum. Dịka m deworo akwụkwọ dịka akwụkwọ ọgụgụ, enwere ajụjụ mkparịta ụka na njedebe nke isiakwụkwọ ọ bụla. Ọ bụ ezie na etinyere ya na ụmụ akwụkwọ mahadum, agbala m ike m niile iji hụ na ọ dị mfe nghọta maka ndị niile na-agụ akwụkwọ na ọkachasị ndị ọkachamara njem nlegharị anya. Otú ọ dị, ịgụ oge ụra abụghị ya. Achọla m ilele anya zuru ụwa ọnụ na ebe enwere ike, tinye ụfọdụ n'ime ọgba aghara na mmemme mgbake nke m so na ya.
Akwụkwọ a bụ akwụkwọ akụkọ mbụ gbasara ihe egwu njem, nsogbu na mgbake kemgbe ọrụ Joan Henderson na 2007. Nsogbu njem nlegharị anya, ihe kpatara ya, nsonaazụ na njikwa. Akwụkwọ Prọfesọ Henderson mara mma ma gbaa m ume. Agbanyeghị, ejiri m n'aka na ọ ga-ekweta, ọtụtụ ihe emeela na njem nlegharị anya kemgbe 2007 na COVID-19, nke m na-ekpuchi ya nke ukwuu, bụ nnukwu nsogbu na ihe ịma aka, ndị ọkachamara njem njem na ndị nkuzi enwetala n'oge ndụ anyị.
Lee nkọwa ebe a. Sage Publishing (London) bipụtara akwụkwọ a, ọ ga-adịkwa n'ụwa niile site na Ọktoba 30 (ụbọchị ntọhapụ Halloween kwesịrị ekwesị). Enwere m olileanya na ị ga-enwe mmasị na akwụkwọ ahụ mana emela ihere ịgwa m na ị meghị ya na ihe kpatara ya. A na m arụ ọrụ n'akwụkwọ ọzọ ka a na-anabata ndụmọdụ bara uru mgbe niile.